Soomaliya – Page 12 – Wararka Khaatumo , Somaliland , Puntland Iyo Somalia
Alshabaab oo si arxan darro ah udishay Dad shacab ah oo ay ku sheegeen in ay katirsanaayeen Ha’yadda NISA.
October 17, 2019 marqaan 0
Kooxda AL-shabaab ayaa sheegatay in ay iyadu ka dambeysay saddex qof oo xalay lagu dilay Xaafadda Baar Ha i dhaafin ee u dhaxeysa labada buundo ee degmooyinka Waaberi iyo Xamar Jajab. War ka soo baxay […]
RWasaaraha Somalia oo shir waxtar leh uga qayb galaya Dalka Mareekanka “Madax heer caalami ah oo imaanaysa”.
Ra’iisul Wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya (XFS), mudane Xasan Cali Khayre ayaa u ambabaxay magaalada Washington ee dalka Maraykanka oo uu uga qayb gelayo shirka sannadlaha ah ee Bangiga adduunka iyo hey’adda lacagta adduunka (IMF) Shirka […]
SAWIRO:- Masuuliyiin katirsan DFS oo kasoo muuqday Maxkamadda Ciidamada Qalabka Sida ee Dalka.
Maxkamada Darajada 1aad ee Ciidamada Qalabaka dia ee Soomaaliya ayaa waxaa Maanta oo Khamiis ah la horkeeney Guddoomiyihii hore ee degmada Maxaas ee Gobolka Hiiraan iyo Shaqsi kale. Guddoomiyihii hore ee degmada Maxaas Cabdiraxmaan Sheekh […]
Wasiir Beyle oo la kulmay madax ka tirsan Bangiga Aduunka
October 17, 2019 Ali Osman 0
Wasiirka Wasaaradda Maaliyadda ee xukuumadda Soomaaliya Cabdiraxmaan Ducaale Beyle oo ku sugan Magaalada Washington ee dalka Mareykanka ayaa waxaa uu la kulmay koox ka socotay Bangiga Aduunka, iyaga oo ka wada hadlay arrimo dhowr ah. […]
October 17, 2019 Ali Osman 1
Warar dheeraad ah ayaa kasoo baxaya dad kale oo lagu afduubtay degmada Balad-Xaawo ee gobalka Gedo oo ay qabsadeen ciidamo daacad u ah wasiirka Amniga Jubbaland Cabdirashiid Janan oo ay Xukuumadda Soomaaliya ku xirtay magaalada […]
« 1 … 11 12 13 … 43 »